चलचित्र ‘यात्रा’ अफरः ट्रेलर हेरेर उत्तर मिलाउनुहोस्, एक लाख जित्नुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, चैत २५ । चलचित्र यात्रा युनिटले आफ्ना दर्शकहरुलाई लक्षित गर्दै नयाँ अफर ल्याएको छ ।
चलचित्रको ट्रेलर हेरेर उत्तर मिलाउने दर्शकले एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्ने अफर चलचित्र युनिटले अगाडि सारेको हो । प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने दर्शकहरुका लागि चलचित्र युनिटले केही नियमहरु अगाडि सारेको छ ।
यही चैत २९ गते रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘यात्रा’को एकपात्र तपस्याले कसरी दृष्टि गुमाइन् भन्ने प्रश्नको ७ उत्तरमध्ये एक सही उत्तर दर्शकले मिलाएर एक लाख पुरस्कार जित्ने छ ।
मेरोमकै डट कममार्फत् सार्वजनिक गरिएको प्रतियोगितामा भाग लिन‍‍‍‍ ‍‍‍‍… लिंक क्लिक गरेर उत्तर दिनुपर्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस अब नायिकाको भूमिकाबाट गायिका क्षेत्रमा
यस्त छन् प्रतियोगितामा सहभागी हुनेले पालना गर्नुपर्ने नियम र प्रश्न
चलचित्र ‘यात्रा’मा गायिका तपस्याले कसरी दृष्टि गुमाइन् ? कृपया तल दिइएका मध्ये एक उत्तर रोज्नुहोस्–
३. एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुको सही उत्तर भएमा ‘लक्की ड्र’ द्वारा भाग्यशाली विजेता घोषणा प्रदान गरिनेछ । लक्की ड्रलाई फेसबुकबाट लाइभ प्रसारण गरिनेछ ।
याे पनि पढ्नुस सिन्धुलीबाट धनगढी पुगेर निर्देशक दीवाकरले भरे दीपिकाको सिउँदो
४. प्रतियोगताको समय नेपाली समयअनुसार १२ अप्रिल, शुक्रबार बिहान ८ बजे सकिनेछ र पुरस्कार घोषणा ३ मे २०१९, शुक्रबारको दिन हुनेछ, जसलाई फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने छ ।
५. प्रतियोगितामा संसारका जोकोहीले पनि भाग लिने सक्नेछ । यदि भाग्यशाली विजेता नेपालबाहिरको भएमा, विजेताले तोकेको व्यक्ति वा नेपालको कुनै गैरनाफामुलक संस्थालाई पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
६. यो प्रतियोगिता रमाइलोको लागि गरिएको हो । त्यसैले कृपया तपाईंको साथी र परिवारसँग शेयर गर्नुहोस् र रमाइलो गर्नुहोस् ।